समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्छ - जम्काभेट - साप्ताहिक
बेलायतलाई कर्मथलो बनाएका लेक्स लिम्बू बरोबर नेपाल आइरहन्छन् । लेक्सलिम्बु डटकममार्फत उनले पर्यटन, इभेन्ट, युवा, उद्यम जस्ता विषयमा ब्लगिङ गर्दै आएका छन् । ट्रेसिङ नेपालका संस्थापक लेक्सले वर्षमा एकपटक विदेश बस्ने नेपालीहरूलाई नेपाल घुमाउने कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै आएका छन् । छोटो समयका लागी नेपाल आएका लेक्ससँग बेलायत उड्नुअघि नरेन्द्र रौलेको जम्काभेट :
तपाईंले ११ वर्ष ब्लगिङ गर्नुभयो । यसबीच के–कस्ता अनुभव बटुल्नुभयो ?
मैले ब्लगिङ थाल्दा (सन् २००८ मा) अंग्रेजी भाषामा मनोरन्जन केन्द्रित ब्लग त्यति थिएनन् । त्यतिबेला मैले नेपाल बाहिर बसेर ब्लगिङ गरें । त्यो मेरो रहर थियो । पछि मैले मनोरञ्जनमा सीमित नरहेर सामाजिक तथा विकासका विषयहरूमा पनि लेख्न थालें । सन् २०१३/१४ पछि इन्टरनेटको विकास अलि राम्रो हुँदै गयो । अरू थुप्रै ब्लग आए । नेपाली अनलाइन मिडिया पनि फस्टाउँदै गयो । यसबीच मैले ट्राभल प्रोजेक्टमा समेत हात हालें ।
ट्र्रेसिङ नेपाल सुरु गर्नुभएको छ । खासमा यो संस्था किन सुरु गर्नुभएको हो ?
म २ वर्षको उमेरदेखि नेपाल बाहिर छु । मैले के अनुभव गरें भनें– म जस्तै, मेरो उमेरका अरू साथीहरू नेपाल गएर के हुन्छ ? बोर मात्र हुन्छ, अल्छी लाग्छ, आफन्तसँग मात्र भेट हुन्छ भन्थे, तर मलाई भने त्यस्तो अनुभूति भएन । विदेशमा जन्मिएका नेपालीहरू जो उतै हुर्किए तिनलाई नेपालको संस्कृति तथा पर्यटनका बारेमा जानकारी दिन हामी ट्र्रेसिङ नेपालमार्फत वर्षमा एक पटक नेपाल घुमाउँछौं । नेपालका गाउँघर देखाउँछौं, रमाइलो गराउँछौं । हामीले सन् २०१४ देखि झण्डै दुई साताको नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम राख्दै आएका छौं । यात्राले पनि एक प्रकारको परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने उद्देश्यले ट्र्रेसिङ नेपालको सुरुवात गरिएको हो । नेपालसँग जोड्नुका साथै भोलि गएर नेपाली युवाहरूले नेपालमै केही गरून् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।
ब्लगिङ बाहेक तपाईंको रुचि के–केमा छ ?
घुम्न मन पराउँछु । दौडन पनि मन पराउँछु । म च्यारिटीका लागि कुद्छु । साथीहरूसँग घुम्ने, खाने, पार्टी जाने । म ह्युज पार्टी पर्सन हुँ ।
बेलायतमा १८ वर्ष नपुगेकालाई बारमा जाने अनुमति छैन । १८ नपुगुन्जेल तपाईं अरूको आइडी कार्ड लिएर जानुहुन्थ्यो रे, हो ?
हो, म आफ्नो कजनको आइडी लिएर १६ वर्षकै उमेरदेखि बार, क्लबहरू पुग्थें ।
तपाईंको कोही आइडियल पनि हुनुहुन्छ ? जस्तो तपाईं बन्न चाहनुहुन्छ ।
मेरो त्यस्तो कोही छैन । म एकैजनालाई भगवान मानेर बस्न सक्दिनँ ।
तपाईंले एउटा भिडियो बनाएर आफू ‘गे’ भएको खुलासा गर्नुभयो । २५ वर्षको उमेरसम्म किन खुल्न सक्नु भएन ?
विदेशमा बसेको, पढेलेखेको भन्दैमा कतिपय कुरा खुलेर भन्न सकिँदैन । काठमाडौंको तुलनामा विदेशमा बसेका कतिपय नेपाली अझै परम्परागत छन् । मैले आफूमा आत्मविश्वास जगाउनु थियो । आफ्नो वातावरण सहज बनाउनु थियो । यो मेरो जिन्दगी हो । म आफ्नै बाटो बनाउन तयार थिएँ । मेरो घर परिवारबाट पनि साथ, सहयोग मिल्यो ।
त्यसपछिका दिनहरू कत्तिको कठिन भए ?
कठिन नै रहे । २५ वर्षसम्म मैले आफ्नाबारेमा खुलेर भन्न सकेको थिईनँ । भिडियोमार्फत मेरो सेक्सुवालिटीका बारेमा सार्वजनिक गरें । मेरो घर, परिवारले त साथ दियो तर अरूले हेर्ने नजर भने फरक रह्यो ।
तपाईं सिंगल हुनुहुन्छ कि कसैसँग रिलेसनसिपमा ?
म सिंगल छु । लुकाउनुपर्ने केही छैन । आफ्नो रुचि मिल्ने कोही स्पेसल फेला पर्दा म रिलेसनमा बस्न तयार छु । मलाई कसैले खुसी बनायो भने म खुलेर भन्न तयार छु, तर अहिले मेरो जीवनमा कोही छैन ।
तपाईंको नाम छ, पहिचान छ । प्रस्ताब त थुप्रै आउँछन् होला नि ?
त्यस्तो पनि छैन । मेरो त्यो भिडियो आएपछि कसैले त म्यासेज गर्लान् जस्तो लागेको थियो, तर कतैबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको छैन ।
विवाह गर्ने, सन्तान पाउने रहर जाग्छ कि जाग्दैन ?
अवश्य नै जाग्छ नि । नेपालमा त समलिंगी विवाह र सरोगेसीलाई मान्यता छैन, यो वैध छैन । कि त धर्मपुत्र ग्रहण गर्नुपर्छ । नेपालमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म ।
तपाईंको एउटा फोटोसुट पनि निकै चर्चामा रह्यो, हिम एन्ड आइ’ थिममा कार्तिक क्षेत्रीसँग गरिएको । त्यसको खास उद्देश्य के थियो ?
कार्तिक क्षेत्रीसँग वसन्तपुरमा फोटोसुट गरिएको थियो । भ्यालेन्टान्स डे र विवाहमा प्रायः केटा र केटीको फोटोसुट गरिएको पाइन्छ । हामीले वसन्तपुरको होटलमा फोटोसुट गर्नुको कारण हाम्रै वरिपरि हामी जस्तै साथीहरू छन्, हामीहरूबीच पनि प्रेम हुन्छ भन्ने हो ।
युवाहरूलाई तपाईंको सन्देश ?